တွယ်ရာမဲ့ပန်းတို့၏မုန်တိုင်းချက်များ ဆောင်းပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း ) ~ ဒီမိုဝေယံ
တွယ်ရာမဲ့ပန်းတို့၏မုန်တိုင်းချက်များ ဆောင်းပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း )
ဟသာင်္တမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်သား ခလေးငယ် တယောက်အပေါ် လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ သတင်းတွေ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်က တဆင့်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ကျနော်အရမ်း တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။ ခလေးငယ်အတွက် အတော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီလို အိပ်မက်ဆိုးတွေကို ကျနော် တခါက ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်များရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး စစ်ကြောရေးစခန်းထဲမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် အခုခံလိုက်ရတဲ့ ခလေးငယ်လောက် မခံခဲ့ရပါဘူး လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျပြီး ရက်စက်ခဲ့လို့ နာကျဉ်ခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်ဆိုးတွေကို ကျနော်ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ အခုခလေးငယ်က၉နှစ်သားလေး။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ တညလုံးလုံး။ ကြိုးနဲ့တုတ၊ ပါးစပ်ကိုစို့ထား တုတ်ချက်တွေနဲ့ ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်လို့ အော်လို့က လည်းမရ ပြန်ရုန်းထွက်ဖို့လည်း အားမသန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်စက်လိုက်တာ အယုတ်မာဆုံးခွေးချေး တွေ… လူ့ကျင်ငယ်ရေတွေကိုတောင် ပါးစပ်ထဲထဲ့လို့ .ခံစား နေရတဲ့မြင်ကွင်း။
ကြောက်ရွံ့အားငယ် ထိပ်လန့် ငိုကြွေးနေမဲ့ သဏ္ဍာန်တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်မိတိုင်း ကျနော်ရင်နင့်မိတယ်။ နောက် သတင်းတွေကြေငြာသွားတော့…. “ခလေးငယ်က သူ့အဒေါ်အိမ်မှာ ခေတ္တတည်းခို နေထိုင် နေရပါတယ်တဲ့” မိဘမဲ့ခလေးငယ်တယောက်ရဲ့ ဘ၀ကဘယ်လောက်ထိ ဆိုးလိုက်လည်းနော်….. ကံကြမ္မာမုန်တိုင်း ရဲ့ရိုက်နှက်ချက်ကြောင့် အထွေထွေဒုက္ခ ရောက်နေရှာတဲ့ လူမမယ် ခလေးငယ် တယောက်ကို ဒီလောက်ထိ မရက်စက်သင့်ပါဘူးဗျာ။ ဒါ..လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တခုပါ…။
လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကို အဓိက ပိုင်းခြားထားချက်ထဲမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား…. တိရိစ္ဆာန်လောကမှာ ဥပဒေတခုပဲရှိတယ်။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း တရားတာ မတရားတာတွေသူတို့မသိဘူး။ အင်အားကြီးသူက အင်အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်မယ်။ အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါက အဆိပ်မဲ့သတ္တ၀ါကို အနိုင်ကျင့်မယ်။ ဒါသူတို့လောက…. လူဟာတိရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူး.. ဒါရှင်းပါတယ်…. ဒါပေမဲ့… လူဖြစ်လင့်ကစား. တိရိစ္ဆာန်အကျင့်ကို ကျင့်မယ်ဆိုရင်.. လူ့တိရိစ္ဆာန်ပါပဲ……. ကျူးလွန်သူတရားခံရဲ့ ယောက္ခမလုပ်တဲ့သူက ပြောတဲ့စကားလည်း သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။ ခလေးငယ်ကို အကျင့်ပျက်တယောက်လို စွပ်ဆွဲပြောဆိုထားတယ်။ ထား…. အကယ်ရွေ့… ကျူးလွန်ခဲ့ရင်တောင်မှ.. အဲသလို ရက်စက်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်… ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိသလားလို့ ကျနော်မေးခွန်း ထုတ်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထက်အရာရာ အားနည်းသူကို လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်လို့… ရလာမယ့် ကျူးလွန်သူတရားခံ…. ဆက်မှုး
ဌေးဝင်း ခေါ် စနိုးရဲ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သူရက်စက်လိုက်တာ တစ်ညထဲပါ….။ သူခံရမှာက ရက်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီခံစားရမှာပါ။ ခလေးငယ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာ နောက်ခြောက်လလောက်ဆို ပျောက်ကင်း သက်သာနေလောက်ပါပြီ။ ကျနော်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ နေလာခဲ့တော့… အသိတခုရလာတာရှိတယ်…..။ လူတစ်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်လိုက်တာတို့… ရိုက်နှက် အနိုင်ကျင့်လိုက်တာတို့ဆိုတာ တွေဟာ.. အတော်တွက်ခြေမကိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲဆိုတာပါပဲ….။ ဆိုပါစို့…. လူတယောက်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆို…. ခံရတဲ့သူက ခဏလေးပဲခံစားပြီး… လူ့ပြည်က ပျောက်ဆုံးသွားပြီ…. လုပ်တဲ့သူက… အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ.. မလွတ်မခြင်း.. လူ့ငရဲခံရပေတော့ပဲ….. လူတွေခနခဏ ပြောနေကြစကားရှိပါတယ်။ “မိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်တဲ့ ” တကယ်တော့ မိုက်တယ်ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး…. ရခဲလှတဲ့လူ့တဘ၀လုံးကို အကျိုးမဲ့စွာ အဆုံးခံရဲမှ… မိုက်လို့ရတာပါ။ အဲဒီတော့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စတခုကို ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ခလေးငယ်အပေါ် ရက်စက်ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး.. နိုင်ငံတကာအနှံ့ မီဒီယာတွေကျေးဇူးကြောင့် ပြန့်နှံ့နေပါပြီ….။ ကရုဏာသက်စွာ ခလေးငယ်ကို လှုဒါန်းကြတဲ့သူတွေကို.. ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်… ပီတိလည်းဖြစ်မိတယ်…..။ ဒါကိုယ်ချင်းစာ တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့…. လူ့ပုံရိပ်ကို လှစ်ပြလိုက်တာပါပဲ……။
ဟသာင်္တနယ်မှာ ရှိနေတဲ့လူထုကို ကျနော်အကြံပြုချင်တာက… .လူသားမဆန်တဲ့.. လူတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့…. ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဦးပါရယ်ဘုရားရှေ့ You..and..Me လဘက်ရည်ဆိုင်ကို သွားရောက် စားသုံးခြင်းမပြုပဲ.. လူသားချင်း စာနာတတ်တယ်ဆိုတာ ကိုသက်သေ ပြပေးစေချင်ပါတယ်….။ ဒီလူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အားပေး၊ အားမြှောက်ပြုစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး….။ ဒါဟာတရားဥပဒေအပြင်.. လူမူ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတမျိုးပါ……..။ ကျနော်ရင်ထဲ စိုးရိမ်မူ့တခုက… ထောင်တွေထဲမှာ.. အင်မတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့.. လူဆိုးတွေ.. တော်တော်များများကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ မိဘမဲ့နဲ့ ရှင်သန်ရတဲ့ သူတွေများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်….။ ဒါ့အတွက် မိဘမဲ့ ခလေးငယ်များကို အရမ်းကို စိုးထိတ်မိပါတယ်။ တခါက အသံလွှင့်ဌာနတခုက လွှင့်သွားတဲ့ နာဂစ်အကျိုးဆက် သတင်းလေးတခု အင်တာနက်က တဆင့်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ခလေးငယ်လေး သုံးဦး ၊ အကြီးဆုံးက ယောကျာင်္လေး (အသက်မှ ၁၂ နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်) နောက်မိန်းခလေး (၆ နှစ်လောက်) အငယ်ဆုံးလေးကလည်း မိန်းခလေး (၃နှစ်သမီးလောက်ပဲရှိမယ်)၊ မိဘတွေအားလုံး နာဂစ်ကြောင့် သေဆုံးသွားကြတယ်…။ ဒီခလေးငယ်လေး သုံးယောက်ထဲက အကြီးဆုံးကောင်လေးက ဂဏန်းကောင်တွေ သွားဖမ်းပြီးပြန်ရောင်း… ရတာလေးနဲ့ မောင်နှမတတွေ အသက်ဆက်နေရတယ်…။ ဂဏန်းဖမ်းလို့ မရတဲ့နေ့တွေဆို…. သူတို့လေးတွေ… ထမင်းအငတ် နေရရှာတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ အနာဂါတ်ကို ဘယ်သူ စောင့်ရှောက်မလည်း၊ ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူမလည်း တွေးမိတိုင်း ရင်မောစရာပါ…..။
(လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းအနှိပ်စက်ခံလိုက်ရတဲ့…. မောင်ထိပ်ကွက်ခေါ်….မောင်စိုးထက်အောင်ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ကူညီချင်သူများ အတွက်ဖုန်းနံပါတ်- 098580204 အရှင်ဥာဏာလင်္ကာရသို့ ဆက်သွယ် ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. ဖုန်းနံပါတ်ကို DVB မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်း အနှိပ်စက်ခံလိုက်ရတဲ့…. မောင်ထိပ်ကွက်ခေါ် မောင်စိုးထက်အောင်နဲ့ DVB မေးမြန်းခန်း..
ဆောင်းပါး ရေးသားဖော်ပြပေးတဲ့ ကိုမောင်မောင်ဝမ်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်...။ ဒီသတင်းကို DVB မှာ စတင်ဖတ်ရှုရချိန်မှာ ရင်နင့်စွာ ခံစားမိပါတယ်...။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ပါ..။ ငါးပါးသီလရဲ့ အနှစ်ချုပ်က ကိုယ်ချင်းစာတရားပါ..။ ခေါင်ကမလုံတော့ တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်ကြားသိနေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကတော့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်မှ ဟုတ်ပါလေစလို့ မေးငေါ့စရာပါပဲ...။ ဒီလူမဆန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ လူ့တိရိစ္ဆာန် လင်မယားနှစ်ဦးမှ လူမမယ် ကလေးငယ် မောင်ထိပ်ကွက်အား ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းအား လူကိုခွေးကိုက်ခြင်းလို့ အမည်တပ်ပါရစေ..။ လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ....။
မောင်ထိပ်ကွက်သတင်း အပြည့်အစုံ ပြန်ဖတ်ချင်ရင်